साहित्यकार नकुल सिलवालद्वारा आत्महत्या – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १६:०७ English
काठमाडौँ, १६ जेठ । बगर फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष साहित्यकार नकुल सिलवालले आफ्नै निवासमा आत्महत्याको प्रयास गर्दा परिवारजनले भेटी उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भएको छ ।
बिहान करिब ७ बजे कोठामा एक्लै भएका बेला सिलवालले आत्महत्याको प्रयास गरेपछि परिवारले थाहा पाई उपचारका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल लैजाँदा बाटैमा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले जनाएको छ ।
सिलवालको शव अहिले परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा लगिएको वृत्तका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामविनय सिंहले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०१९ मा सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ गाविसमा जन्मनुभएका साहित्यकार सिलवालले २०३९ सालमा बगर फाउन्डेसन खोली नेपाली साहित्यिक कृतिको प्रकाशन र ‘बगर’ र ‘नदी’ पत्रिका सम्पादन गर्दै आउनुभएको थियो ।
उहाँका कथा, निबन्ध, उपन्यास, लेख, कविता सङ्ग्रहलगायत एक दर्जन पुस्तक प्रकाशन भएको छिमेकी एकराज आचार्यले बताउनुभयो । साहित्यकार सिलवालले विभिन्न विधाका पाँच दर्जन कृतिको सम्पादन समेत गर्नुभएको छ । हाल ओमकारमार्ग, शान्तिनगर नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आउनुभएका उहाँका श्रीमती र दुई छोरा हुनुहुन्छ । रासस
१७ जेष्ठ २०७३, सोमबार ००:०० मा प्रकाशित
महासंघको निर्वाचनमा शतप्रतिशत मत खस्यो, मत गणना आजै हुने	१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:११
स्थानीय तहको निर्णयमा क्रमशः विद्यालय खुल्दै	१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:०९
बलात्कार आरोपित बालकलाई छ महिना कैद	१३ मंसिर २०७७, शनिबार १४:५१
उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान सुरु	१३ मंसिर २०७७, शनिबार ०८:४९
प्रहरी हुँ भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ	१३ मंसिर २०७७, शनिबार ०८:३५
नेपाल एकीकरणको उद्गमस्थलमा आउन पाउँदा गर्व लागेको छ : भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला	१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १७:००
महासंघको निर्वाचनमा शतप्रतिशत मत खस्यो, मत गणना आजै हुने
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:११
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:०९
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:०७
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:०६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाएका आरोपबारे लिखित जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले..
प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा के छ ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । सचिवालय बैठकका लागि..
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा..